DAAWO: Shacabka Puntland, gaar ahaana Boosaaso sidii u arkaan Ceyrinta DP WORLD oo maamusha Dekedda magaaladaas? – Puntlandtimes
DAAWO: Shacabka Puntland, gaar ahaana Boosaaso sidii u arkaan Ceyrinta DP WORLD oo maamusha Dekedda magaaladaas?
March 13, 2018 W LAASCAANO
BOOSAASO(P-TIMES)- Qaar kamid ah Shacabka Soomaaliyeed ee kunool magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan ceyrintii baarlamaanka Soomaaliya ay ku sameeyeen shirkada DP WORLD oo laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta, taas oo hadda maamusha dekeda Boosaaso.
Shacabkan oo la hadlay Tv-ga SBCTV ayaa muujiyey dareenkooda, waxaana qaar badan oo kamid ah ay soo dhaweeyeen talaabada baarlamaanka Faderaalku ay qaateen, iyagoo ku eedeeyey Imaaraatku in ay faa’iido ka raadinayaan dekedaha Soomaaliya.
Talaabadan ayay soo dhaweeyeen shacabku, waxayna muujiyeen sidda ay u doonayaan in ay arkaan dawladnimo Soomaaliyeed, iyadoo laga duulayo qorshaha maareynta hantida Ummaddan Soomaaliyeed.
Dawladda Puntland oo heshiiskan la saxiixatay shirkada P & O oo katirsan DP WORLD ayaan wali ka hadlin qaraarka ay gaareen baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya, kas oo ay gabi ahaanba shirkadaha Shisheeye, gaar ahaana DP WORLD uga mamnuuceen in ay ka shaqeyso gudaha dalka.
HALKAN RIIX SI AAD U DAAWATO DAREENKA SHACABKA
DHAGAYSO:Maydadka ardaydii ku dhintay shilkii Bosaso oo baadhis ay ku socoto & Eheladoodii oo la hadlay Puntlandtimes + Akhriso Magacayadooda
DAAWO:Wararkii ugu dambeeyey ee Bosaso & Ardaydii ku dhaawacantay Iyo Kuwii ku dhintay shilkii gaari oo….
Maydad & Dhaawacyo badan oo la geeyey magaalada Bosaso kadib markii…..
WAR HADA SOO DHACAY: Hubka oo lasoo wada gurtay & Diyaar garowgii ugu cuslaa ee Somaliland looga xooraynayo gobolka Sanaag oo socda “Shacabkii xataa dagaalka……
DEG DEG:Dagaal culus oo ka qarxi raba jiidaha hore ee Yubbe & Ku dhow 30 Tikniko ah oo gaadhay furimaha hore
DAAWO:Xaalada oo allow sahal ah & Ciidamada Somaliland Iyo Puntland oo qarka u saaran in ay kuwada dagaalamaan deegaanka….